Isikhundla (postural) amanzi e pathologies bronchopulmonary: kahle nobuchwepheshe izinqubo
Lolu cwaningo emitholampilo lwajula cwaningo yezindawo lapho uketshezi sokugembula kule zokuzamazama ezahlukene umgudu wokuphefumula. Phakathi ucwaningo laboratory, abacwaningi bathola ukuthi le positioner (postural) kusiza ukuqinisekisa amanzi okusheshayo purulent uketshezi outflow in iziguli nezifo zokuphefumula.
Lokhu kufakwa kule nqubo ku therapy kuhlanganiswe kunganciphisa inani lezinkinga ezingathi sína, ubude ukwelashwa, ukuvimbela ukwakheka ingcindezi izilonda futhi amacala ebulalayo. Le nqubo yasungulwa uhlanzekile umgudu wokuphefumula, njengoba kwezokwelapha, nakanjani ephephile futhi athwala mkhuba omuhle. Ingasetshenziselwa e izingane ezineminyaka engu eminyakeni emibili, kodwa kuphela oluvuna wezingane injongo noma i-physiotherapist.
Okushiwo massage zokwelapha
Okokuqala, kufanele siqonde ukuthi postural amanzi. Lena inqubo yezokwelapha elikuvumela ukuba asuse isicubu okungavamile kusukela uketshezi esebenzisa ekhethekile ompompi, unhlangothi futhi Pats. ukubaluleka kwalo kuba sobala ngemva ngokuqaphelisisa esiguli, ababethwala massage. Ngoba kufike umuntu mumbe nesineke session kungase expectorate isikhwehlela 200 ml nge nephunga ezingezinhle.
Ngakho-ke kuyacaca ukuthi exudate ubovu ngaphambilini kwaba ngo kuqhoqhoqho futhi wabangela ukudakwa esabekayo. I athuthukile indlela uketshezi outflow Ithuthukisa kakhulu ukupholisa ka amaphaphu izingxenye kunciphisa nesenzakalo inyumoniya hypostatic kusiza ukugeleza kwegazi futhi umsebenzi zokuphefumula. Isicelo zokukhwabanisa zokwelapha e pathologies ezehlukene esiswini njengoba kuphakeme kakhulu izindlela zesintu sokuhambisa amanzi ngesilinganiso excretion trudnootdelyaemoy futhi ubovu isikhwehlela.
Postural amanzi: izinkomba yokuhlabelela inqubo
umzimba Special babelwa iziguli lezi zifo ezilandelayo:
- ukucinana kwemigudu yokuphefumula,
- bronchiectasis nakwezinye izifo yaleli pheshana zokuphefumula.
Njengoba kuchazwe ngenhla, inqubo yezokwelapha kususa isikhwehlela kusukela kuqhoqhoqho kwakhiwa, okubangela ukukhwehlela elikhiqizayo, imisipha ze- bronchi. Kuphela ngaphansi mkhosi okuqinile nalezi zindlela kukhona expectoration. amanzi Postural wenziwa zonke izikhungo zezempilo. Kahle amasu obonisa wonke umuntu can.
Kodwa ngaphambi isidingo mncane out the isikhwehlela usebenzisa izidakamizwa mucolytic futhi ane-alikhali ukuphuza. Inqubo, isikhundla umzimba kanye ukushuba Ukusebenza omdala nengane zihlukile. Kubalulekile banamathela imiyalelo ukubona intuthuko omuhle ekwelapheni izifo bronchopulmonary.
amanzi Postural wenziwa ukuhlukahluka ezintathu: esiswini, emuva, ohlangothini. Isikhundla abakhethiwe owelapha. Ungasebenzisa zonke zibhekise nodokotela imvume. Isiguli kufanele amanga flat, eqinile ngaphasi kwemadvolo akho agxumele umcamelo noma yokulala ikhanda kwaba emgogodleni aphansi.
Amafutha noma uwoyela isandla ukhilimu futhi aqala ukukhiqiza ukunyakaza Rhythmic kanye ngemuva (phezulu / phansi) ngoba emizuzwini engu-30.
Okulandelayo, ukukuthinta endaweni izindwani futhi amaphiko kancane kancane kuyashesha izinga. Ngemuva kwemizuzu engu-ezintathu, lapho emuva is kahle sekuqala ukufudumala, uqhubekele pussycat (nezandla ezigoqiwe ngesimo isikebhe) kusukela izinhlangothi ikholomu vertebral - nhlangothi zombili.
Phela manipulations massaging isifuba ukuze liphume igazi kangcono isikhwehlela.
Liphelelise lo mjikelezo umzimba, cela isiguli udonsa kakhulu umoya futhi ukukhwehlela kakhulu, ukuqoqa uketshezi kule kuqhoqhoqho waphuma.
Kunconywa ukuba afeze eyinkimbinkimbi yezokwelapha yokuhlanza amaseshini 2-3 izikhathi ngosuku izinsuku ezinhlanu.
Ubani banqatshelwe amanzi postural ze- bronchi?
Le nqubo ilula futhi kufinyeleleke ukusetshenziswa ekhaya, kodwa enezinto eziningi Izimo. Kuyingozi ukuba sifeze inqubo abantu nesifo senhliziyo, umfutho ophezulu wegazi kanye pathologies palsy. It kungavunyelwe esigabeni oyingozi pneumonia uma kukhona lokushisa eliphezulu. Hhayi engabelwe ukopha yamaphaphu, ukuhlukumezeka yomgogodla, izimbambo, futhi kwadala umonakalo ezicutshini.
Sengiphetha, ngifuna kukubeka ngembaba ukuthi amanzi postural kunciphisa ngobucayi isifo, ikhuthaza ukululama ngokushesha kanye nokuvuselelwa ngemva kokuba ukugula.
Yokufikelwa: Izimbangela Nezingozi Izinhlobo
White ulimi enamathela (Impande): Izimbangela
Amatshe Crushing ku ultrasound izinso: kuzibuyekezo, izintengo
Kanjani ultrasound wemikhawulo aphansi
Colic Hepatic. Kungani kubonakala sengathi yamukelwa.
Chimney hood: i Uhlolojikelele, izici, izinhlobo kanye ukufakwa ubuchwepheshe
"Tramal" imithi. Yokusetshenziswa
"Hephaestus" ipuleti. Izibuyekezo of the ipuleti, "Hephaestus"
Isitayela swag. Kuyini lokhu?